musha / zvishongedzo / Bathroom accessories / Matte Nhema Imwe Towel Hooks Bathroom
Matte Nhema, Stylish uye akasarudzika matte maitiro anoita iyo Towel chirauro mubati ataridze fashoni uye anzwe kugadzikana. HAPANA kupera, chivara-chiratidzo chinogadzirisa kugadzirisa zvigunwe zvemunwe uye kuunganidzwa kweguruva nemafuta. YAKO shambidzika neine nyoro, nyoro jira zvinyoro nyoro.
Wall wall Matte Nhema Imwe Towel Hooks ndiwo musanganiswa wakakwana wemazuvano, akapfava uye akapusa.it inogona kunge ichishandiswa kumaketeni tie kumashure. Alsowork mushe muhofisi yekuturika majasi, zvikwama, amburera, nezvimwe zvemazuva ano zvinotaridzika uye zvinoshanda! Iyo haka inoshanda zvakanaka nezvose zviri zviviri nguvo uye matauro.
Muviri wese wakavakwa neType 304 premium grade simbi isina simbi, iine yakawedzera 18/10 Chromium / Nickel zvemukati kudzivirira kubva kuora & ngura. 4 dziviriro materu anowedzerwa pane 304 simbi isina waya kuti iite yakasimba uye More Anti-Rust
Nhema imwe hoko
Stainless simbi SS304
Transparent anchor + -4 * 35mm sikuruu + hex kiyi
SKU: 480106DB Categories: zvishongedzo, Bathroom accessories Tags: Bathroom accessories, hokoreti dzejasi, Wall Mount
WOWOW Kicheni faucet Spray Musoro G1 / 2